Zimbabwe – The Siasat Daily
Harare: Pakistan Cricket Board (PCB) on Monday congratulated the Pakistan men’s cricket team on their sixth consecutive series win and Babar Azam, who has become the first Pakistan captain to win his…
Harare: Abid Ali on Saturday broke former skipper Younis Khan’s eight-year-old record of the highest score by a Pakistan batsman in Zimbabwe in the longest format of the game. Abid (215) scored…
Harare: After beating Zimbabwe by an innings and 116 runs in the first Test, Pakistan will look to sweep the two-Test series with another win in the second Test that begins at the…
Harare: Pakistan cricket team skipper Babar Azam on Saturday said that the 19-run loss to Zimbabwe in the second T20 International here did not bode well for his team as it prepares for…
Abu Dhabi: Due to a finger injury, Afghanistan star spinner Rashid Khan is likely to miss the first Test against Zimbabwe that will kick-start on Tuesday. According to a report in ESPNcricinfo,…
Lahore: Pakistan Cricket Board (PCB) on Sunday announced that the ODI series between Pakistan and Zimbabwe will be staged at Rawalpindi while the shorter-format series will be played in Lahore. The three-match…
Dhaka: A spirited Bangladesh defeated Zimbabwe by 48 runs in the first T20I here at Shere Bangla National Stadium on Monday. With this win, Bangladesh have taken a 1-0 lead in the…
Harare: Zimbabwe trails Sri Lanka by 127 runs after the conclusion of day four of the ongoing first Test on Wednesday here at the Harare Sports Club. In the second innings, openers…
Harare: Zimbabwe is facing “man-made” starvation with 60 percent of the people failing to meet basic food needs, a UN special envoy said Thursday after touring the southern African country. Hilal Elver,…
Kutama [Zimbabwe]: Former Zimbabwe President Robert Mugabe was buried in his home town of Kutama in Zvimba district on Saturday, weeks after the government and his family were at odds over the…
Zimbabwe’s ex-president Mugabe buried in rural village
Zimbabwe: The body of Zimbabwe’s former president Robert Mugabe was buried on Saturday in his rural village of Kutama, an AFP reporter at the scene said. Mugabe died in a Singapore hospital…
Zimbabwe doctors’ labour leader ‘kidnapped’during strikes: union
Harare: Union activists and rights campaigners on Sunday accused Zimbabwe’s security forces of kidnapping the leader of a doctors’ union, who disappeared during a strike he had helped organise. The Zimbabwe Hospital…
Harare: Zimbabwe’s late President Robert Mugabe will be buried on September 15, according to a government statement. Mugabe, 95, died on September 6 in Singapore where he had been receiving medical treatment since…
Harare [Zimbabwe]: Zimbabwe defeated the United Arab Emirates by 131 runs, sealing the four ODI match series 3-0 against the visitors here on Sunday. Zimbabwe were put out to bat first and…
Dubai [UAE]: Zimbabwe have announced a 16 member squad to take on United Arab Emirates (UAE) at home for the first two games of a four-match ODI series which will be played…
Harare [Zimbabwe]: Zimbabwe are set to host the United Arab Emirates (UAE) and tour to the Netherlands for limited-overs series. Zimbabwe will play four ODIs against UAE in April, while contest with…
New Delhi: In the wake of Cyclone Idai which ravaged South African nations of Mozambique, Malawi and Zimbabwe, killing as many as 100, India diverted three naval ships to the port city…
Harare: At least 24 people have been killed as Cyclone Idai wreaked havoc in southeastern Zimbabwe, officials said on Saturday. The Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services tweeted on Saturday that…
Harare [Zimbabwe]: Hamilton Masakadza has been retained as Zimbabwe’s skipper in all three formats, with Peter Moor named as his deputy for the 2019-20 season. The top-order batsman Masakadza led his side…
Harare: Over 60 gold miners are believed to have died in two mining shafts after a nearby dam burst in Zimbabwe’s Mashonaland West province, authorities have said. The number of illegal miners…
Bulawayo: Protests against the Zimbabwe government’s decision to raise fuel prices continued for the second day, even as hundreds of people complained that they were unable to access popular social networking platforms…